GEEDO GEEDO BASBAAS: GOORTII LA BEERO, DOORAN, DIYAARIN IYO BEERITAANKA ABUURKA, WAKHTIGA CALEEMAHA UGU HOREEYA IYO BEERITAANKA DHULKA, DARYEELKA KU HABOON - BEER CAGAARAN
Ugu Weyn Ee Beer cagaaran
Beeraha saxda ah ee basbaas ee geedo: marka ay beero, sida loo doorto iyo diidaan abuur, talooyin ku saabsan nidaamyada beeraha, daryeelka caleemaha yar yar
Pepper waa dalag cagaaran oo caan ah oo badanaa lagu koriyo oo lagu koriyo, lagu koriyo, ama guriga.
Seeds Gacinate si tartiib ah, sidaas darteed geedo hore u koray waxaa lagu beeray dhulka.
Goosashada mustaqbalku waxay ku xiran tahay tayada iyo sida loo abuuro basbaaska geedaha, sidaas darteed dareen gaar ah waa in la siiyaa xilliga beeridda, ciidda, waraabinta iyo waxyaabo kale oo muhiim ah.
Mawduuca maanta maqaalku waa beeritaanka basbaaska geedo: markaad beertid, sida loo aaso basbaaska geedo ee guri dabaq ah, talooyin loogu talogalay bilowga bannaanka.
Geedo khudradeed: goorta la beero?
Madaarka ka mid ah dhaqamada leh muddo dheer biqilka. Laga soo bilaabo abuurka abuurka ah si loo beerto dhirta dhalinyarada ee dhulka ama aqalka dhirta lagu koriyo waxay qaadataa laga bilaabo 90 illaa 100 maalmood. Geedaha of noocyo bislaado hore u gaarsiiyaan size size ka dib 3 bilood, waxaa lagu beeray karo marka ciidda kulaalaa 16-18 digrii.
In aqalka dhirta lagu koriyo, geedo ayaa loo wareejiyaa muddadii hore, waxaana lagu beeray dhulka hoostiisa filimka wax yar kadib. Inta badan waxay ku xiran tahay gobolka iyo xaaladaha cimilada gaarka ah.
Ogaanshaha markaad dhulka ku sugan tahay, waad awoodi kartaa si sax ah u xisaabiya wakhtiga abuuritaanka basbaaska geedo. In bartamaha Russia, abuurka abuurka waa ka fiican February ama horraantii Maarso. Gobolada diiran, abuurka waxaa lagu beeray laga bilaabo January, iyo geedo yihiin beeray dhamaadka April.
Meelaha leh jawiga qabow, abuurka waxaa lagu beeray bartamaha ama xitaa dhamaadka bisha Maarso.. Dhirta dabiiciga ah ee la beeray ayaa si fiican loogu beeray aqalka dhirta kulul, sidaas awgeed dhammaan miraha waxay bilaabaan inay bislaadaan. Qalabaynta wareegga sanadka oo dhan, basbaaska waxaa lagu beeray laba jeer sannadkii, January iyo February iyo dhamaadka Sebtembar.
Qaar badan oo beeraley cagaaran fiiri taariikhda calaamadaha la socdo jadwalka dib u dhaca. Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu beeray basbaas waa marka dayaxa uu ku jiro wajiga koowaad ee saameynta Libra, Scorpio, Aries ama Sagittarius. Iyadoo ku xiran sanadka, taariikhaha ayaa la bedelay, waxaad ku arki kartaa maalmaha xaadirka ah ee jadwalka gaarka ah. Waxay muujineysaa taariikhaha ugu habboon, iyo sidoo kale maalmaha ay tahay in laga hortago.
Ku habboon Waqtiyada joojinta ayaa sidoo kale lagu tilmaamaa baakooyinka abuurka.. Noocyada Bisaylkiisa hore oo leh xilli gaaban oo sii kordhaya ayaa la beerayaa karaa dhammaadka February, noocyo Bisaylkiisa dambe ayaa lagu beeray sida ugu dhaqsiyaha badan. Geedo lagu beeray Janaayo waa in la iftiimiyo, tan iyo maalinta iftiinka waqtigaan aad u gaaban yahay horumarinta caadiga ah ee basbaaska dhalinyarada.
Abuuridda abuurka basbaaska ee geedo
Ka hor inta aadan ku beeran abuurka basbaas si aad geedo u baahan tahay xalliyo miraha buuxa. Waxaad ku hubin kartaa adigoo ku qallajinaya 3% salineeska salineeska ah. Waayo, abuurka abuurku waa ku habboon yahay, ayuu hoos ugu dhacay. Ka hor inta aan la beeri, waxaa lagu talinayaa in lagu qooyo kiciyaha kicinta ama casiir aloe cadaadis ah oo muddo 10-12 saacadood ah.
Noocan ah daaweynta si weyn u hagaajiso biqilka. Qaar ka mid ah beeralayda ayaa nadiifin kara abuurka, iyaga oo si kooban u gaabinaya manganis ama 3% hydrogen peroxide.
Abuurka qallalan wuxuu ku dhalan karaa 2 toddobaad ka dib marka la beero, iyo kuwa horay loo soo goostay - 5-6 maalmood. Wixii barar ah, miraha waxaa lagu duuduubay maro qoyan iyo dhowr maalmood ka dib..
Wixii beeritaanka diyaarinta ciidda ka yimid isku dar ah beerta ama dhulka cawska iyo humus jir. Waxaa lagu beddeli karaa peat ama isku darka ciidda ganacsiga. Qiimaha nafaqada ee weyn, superphosphate ama qoryaha qoryaha waxaa loo soo bandhigay ciidda. Ciidda si fiican ayaa loo isku qasan yahay, waa inay noqotaa mid jilicsan, iftiin iyo jajab..
Wixii soo saaro weelasha ku habboon ee godadka hoose ee hoose iyo digsiga.
Waxaad abuuri kartaa miraha qaybo ka mid ah filim caag ah, lagu duubay foomka koobabka, warqadaha ama weel caag ah, koobabka peat ama kiniin. Markaad abuurto shinnirooyin weel kala duwan, waxaad tirtiri kartaa xulashada soo socota.
La isku habeeyey weelasha waa inaysan noqon mid aad u ballaaran.
Sida loo aaso basbaaska on geedo si sax ah?
Inta badan, miraha basbaaska waxaa lagu beeray weel daboolan oo haboon. Waxay si adag u buuxsamaan ciidda si ay u jiri karto illaa 2 cm dhinaca dhinacyada, iyada oo buuxinaysa, ma jiri doonto xayiraadda ciidda inta lagu jiro waraabinta. Ciidadu waxay u baahan tahay inay tampagaan oo ay daadiyaan xal khafiif ah oo casaan ah oo ah kaneecada kaneecada.
Sida loo abuuro basbaas on geedo? 12 saacadood ka dib, godadku waxay sameeyaan dusha sare ee ciidda qiyaastii 1 cm oo qoto dheer.Qarajyada waxaa lagu beeray meel fog oo ah 2 cm midba midka kale, meesha u dhexeysa grooves waa 4-5 cm.
Si loo dedejiyo biqilka, weelka waxaa lagu dabooli karaa filim, galaas ama maro qoyan.
Beeridda qashinka ah si loo geedo waxaa lagu samayn karaa weel ballaaran ama weelal gaar ah: koobabka, xargaha duuban ee filim qaro weyn. Soo saarista taangiyada shakhsiga ah ayaa ciribtiraya musqulayaasha xiga. Waa muhiim in la doorto abuur tayo sare leh.si looga fogaado cirbadaha.
Sida loo aaso basbaaska on geedo ku jira weelal gooni ah? Marka lagu beeray koobab, dhulku wuxuu ku qoyan yahay biyo diirran, dalool waxaa lagu sameeyaa in uu yahay 1-1.5 cm qoto dheer, farcanka si fiican ayaa loo dhigaa loona rusheeyaa dhulka. Koobabka waxay si adag ugu habboon yihiin santuuqa.
Sida loo abuuro geedo bisil ah ee kiniinnada peat? Ka hor inta aan beero, kiniinnada leh dhexroor ah 3 cm ayaa lagu duubaa weel qoto dheer waxaana ka buuxsamay biyo diirran. Dhowr saacadood ka dib, peat wuu barari doonaa oo kordhi doona cabbirka, kiniinnadu waxay u rogi doonaan tiirar leh nidaam. Dheecaan badan ayaa la miiray.
Qeybta sare ee boostada waxaa ku yaalo godad yar oo u baahan in la sii xoojiyo oo la dhigo iyaga proklynuvshiesya miraha. Ceelasha waxaa ka buuxsamay ciidda la jajabiyey oo waxoogaa yar la jajabiyey. Waraabiyo abuurka abuurka ah lagama maarmaan maahan. Salka sarreenka waxaa lagu rakibay weel caag ah. Waxaad u baahan tahay inaad si adag u dhigto si aad uga hortagto wareegga. Laga soo bilaabo kore ayaa saxaaradu waxay daboolaysaa dabool ama filim.
Sida loo aaso basbaaska geedo, sawir:
Heerkulka iyo waraabinta
Isla markiiba beeridda weelasha ama dheryooyinka ayaa la dhigayaa meel kulul. Heerkulka wanaagsan ee biqilka waa 27-28 digrii. Beeraha qaarkood ayaa si diirran u diiriya ciidda ka hor intaan la beeriin, taas oo ku dhajinaysa batoonka. Yaraynta heerkulka dib-u-dhigga biqilka iyo badanaa wuxuu keenaa dhimashada miraha.
Marka sprouts muuqaalka dusha ciidda, geedo waxaa la geeyaa meel ugu qurux badan. Waa hagaag, hadii ka badan dhulbowlaha ayaa lagu rakibayaa nalalka iftiinka dheeriga ah. Maalinta ugu fiican ee basbeelku wuxuu soconayaa 12 saacadood. Habeenkii, soo degitaanka waxaa lagu dabooli karaa maro cadcad.
Ka dib markii biqilka, heerkulka qolka wuxuu ku dhacaa 20-25 digrii. Waraabinta geedo-buunshaha waxay u baahan yihiin 1 jeer 5-6 maalmoodMarka hore, laga bilaabo qoriga buufinta, ka dibna laga bilaabo waraabinta. Weelka geedo leh geedo ayaa si gooni ah u wareegsan si ay geedo u koraan si siman. Ka dib muuqaalka kore 2 caleemaha ugu horreeya, dhirta ayaa diyaar u ah inay soo qaado.
Basbaaska lagu beeray kiniinnada peat waa in loo wareejiyaa dheriyada hore loo diyaariyey substrate nafaqo leh.
Waqtiga lagu beeray geedo si fiican u koraan, ha u xanuunsan oo uma baahnid daryeel gaar ah. Si adag u ilaalin habka waraabinta iyo ilaalinta heerkulka la doonayo ee qolka, ma aad ka welweli kartid beerashada dhalinyarada.
Waa muhiim inaadan gurigaaga ku hayn muddo aad u dheer iyo inaad ku beerato deganaansho rasmi ah ka hor bilawga wajiga ubaxa, haddii kale geedisocodku wuxuu yareeyaa.
Sidaa darteed, waxaan ogaanay sida loo abuuro geedo basbaas at home, si sax ah iyo si wax ku ool ah, xeerarka beeridda, sida iyo goorta ay u abuurtaan abuur ah, daryeel ka dib beero.
Caawin! Baro qaababka kala duwan ee basbaaska sii kordhaya: dheriga peat ama kiniinnada, dhulka furan iyo iyada oo aan la qaadan, iyo xataa waraaqda musqusha. Baro qaabka qaniinyada abuurista ee dabka, iyo sidoo kale cudurada iyo cayayaanka ay weerari karaan geedahaaga?
Alaabta waxtarka leh
Akhri maqaallo kale oo geedo ka kooban:
Kobcin habboon ee abuurka iyo in ay ku qoyaan ka hor beerto?
Sidee loo abuuraa digir basbaaska madow, miro, qadhaadh ama macaan at guriga?
Waa maxay kor u qaadida kobcinta iyo sida loo isticmaalo?
Sababaha ugu muhiimsan ee caleemaha loo rogay caleemaha, geedo hoos u dhacaan ama fidiyaan, iyo sidoo kale sababta ay u dhiman karto?
Shuruudaha laga beerto gobollada Ruushka iyo gaar ahaan beerashada Ural, Siberia iyo gobolka Moscow.
Baro cuntooyinka caanaha lagu dubo.
Sidee dhadhan fiican leh oo u sameysan kartaa saxaraha caag-macaan iyo barokooli? Cunto kariska
Dhibaatooyinka iyo cudurrada Zamiokulkas (Dhulka Doolar) iyo qaababka daaweynta dhirta
TOP-7 cunto fudud oo la shiilay kaabajka Beijing
Isku diyaari daroogadaada: tincture toon qamriga
Waa maxay Mason's begonia, nooca daryeelka uu u baahan yahay, sidee ayuu u dhufanayaa oo u eegi karaa sawirka?
Canab guryo ah xilliga qaboobaha
Geedka loo beeray xilliga dayrta
Dagaalidda digaagga ee digaagga
Decoction xidid Peony
Qodobada faa'iidada leh ee agave waxaa loo yaqaan Indiya oo ku noolaa dalka Mexico. Iyo warshadkan marwalba waa la jaan qaaday halyeeyooyin badan oo ka mid ah dadka asaliga ah. Mid ka mid ah ayaa sheegay in dadku aysan heli karin isticmaalka agave, kaas oo si ba'an loo qariyey aagagga waaweyn. Laakiin markii uu boodhku ka baqdiyay, oo iftiimintu waxay ku dhufatay agave sare. Read More
Qaraha - Berry sonkorta. Sida loo koro qaraha watermelon ee dalka iyaga keligood
Sida loo sameeyo chacha laga bilaabo canab guriga
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Beer cagaaran 2019